Ungayisebenzisa kanjani i-Zilt yezidakamizwa? > Ukwelashwa nokuvimbela
Ungawaphuza kanjani (uwaphuze) amaphilisi eZeke
Ngokuvimbela ukubopha kwe-ADP kuma-receptors akhiwe phezu kwamaplatelet kanye nokwenza kusebenze kwe-GP IIb / IIIa tata, i-clopidogrel inhibits ukuhlanganiswa okuphathelene ne-ADP. IClopidogrel ibuye ivimbele ukuhlanganiswa kweplatelet okubangelwa ezinye izinto. Umphumela we-clopidogrel uphikelela kuyo yonke impilo yamapuleti.
Ngokusetshenziswa isikhathi eside kwe-clopidogrel ku-umthamo wokwelapha (75 mg / ngosuku), isithiyo esivaliwe sokuhlanganiswa kweplateletation sivele senzeka ngosuku lokuqala lokwelashwa, khona-ke umphumela we-antiplatelet uyakhuphuka kancane kancane futhi ufinyelela ezingeni eliphezulu ngemuva kwezinsuku ezi-3-7 zokusebenzisa umuthi njalo. Ngokusebenzisa isikhathi eside kwe-clopidogrel ku-umthamo wokwelapha, ukuvimbela okujwayelekile kokuhlanganiswa kweplatelet kuyinto 40-60%. Ngemuva kokuyeka ukwelashwa, umphumela we-clopidogrel on aggregation kanye nesikhathi ukopha uyanyamalala, ngokuvamile ngemuva kwezinsuku ezi-5.
Ngemuva kokuphathwa ngomlomo, i-clopidogrel idonswa ngokushesha (isikhathi sokufinyelela ekugxileni kwe-plasma enkulu amahora angama-0.7-0.8). Ngemuva kwamahora ama-2, umuthi awusatholakali ku-plasma wegazi. I-Absorption icishe ibe ngu-50% futhi azimele ekutholeni ukudla. Ingxenye eyinhloko ye-clopidogrel kanye ne-metabolite yayo eyinhloko (ngokulandelana i-98 ne-94%) ibuyisela emuva kumaprotheni e-plasma.
I-Clopidogrel iyi-prodrug. It is metabolized in theibindi, i-metabolite eyinhloko isuselwa kokungasebenzi kwe-carboxylic acid. Ukuhlushwa kwaso ku-serum yegazi kungama-85% wesamba sonke sezidakamizwa. Ukuhlushwa okuphezulu kwe-serum yegazi kufinyelelwa cishe ihora eli-1 ngemuva kokuphathwa. I-metabolite esebenzayo - i-thiol derivative - yakheka i-oxidation ye-clopidogrel ukuya ku-2 - i-oxoclopidogrel, elandelwa yi-hydrolysis. Lokhu oxidation kwenzeka ngokubamba iqhaza kwe-cytochrome P450. Le metabolite esebenzayo engahlukaniswa in vitro, ngokushesha futhi ngokungenakuphikiswa kubopha kuma-receptor ama-platelet futhi kuvimbela ukuhlanganiswa kwawo. Akutholwa kwiseramu yegazi.
Ngemuva kokuphathwa okukodwa noma okuphindaphindiwe ngomchamo, ama-50% ayafakwa, futhi ngamayunithi - ama-46% omthamo ophethwe yi-clopidogrel. Ukuphila kwesigamu se-metabolite enkulu ngemuva kokuphathwa okukodwa noma okuphindaphindwe ngomuthi ngamahora angama-8.
Izinkomba zokusebenzisa umuthi i-Zilt
Ukuvimbela izehlakalo zenhliziyo (i-ischemic stroke, infyoction ye-myocardial kanye nokufa kwenhliziyo) ezigulini ezinokubonakaliswa komtholampilo kwe-atherosclerosis: ngokuhlaselwa i-ischemic (kusuka ezinsukwini eziyi-7 kuye kwezinyanga eziyi-6), i-myocardial infarction (kusuka ezinsukwini eziningana kuya ezinsukwini ezingama-35 ngemuva kokuhlaselwa yinhliziyo), phambi kwezifo zemithambo yegazi.
Ukusetshenziswa kwesidakamizwa uZeke
Umthamo ojwayelekile ezigulini zabantu abadala (kufaka phakathi asebekhulile) yithebhulethi eli-1 (75 mg) ngosuku. Umuthi ungasetjenziswa kungakhathalekile ukuthathwa kokudla.
Isikhathi sokwelashwa asikasungulwa, kepha ama-regimens ukwelashwa afinyelela ezinyangeni eziyi-12 asetshenziswa, umphumela omkhulu ubonakala ngemuva kwezinyanga ezi-3 zokuphuza umuthi.
Indlela yokusebenzisa iZilt kwifomu lethebhulethi
Ngaphakathi, akunandaba nokudla okungakanani, kanye ngosuku.
Abantu abadala kanye neziguli esezikhulile ezinomsebenzi ojwayelekile we-CYP2C19 isoenzyme
I-Myocardial infarction, ischemic stroke, noma isifo se-peripheral arterial occlusion.
I-Zilt® ithathwa ngomthamo we-75 mg (i-1 i-tablet) kanye ngosuku.
I-acute coronary syndrome ngaphandle kokuphakama kwengxenye ye-ST (i-angina engazinzile noma ukufakwa kwe-myocardial ngaphandle kwe-Q wave)
Ukwelashwa nge-Zilt® kufanele kuqalwe ngomthamo owodwa womthamo wokulayisha (300 mg), bese kuqhubeke nomthamo ka-75 mg kanye ngosuku (kuhlangene ne-acetylsalicylic acid emithanjeni yama-75-325 mg ngosuku). Njengoba ukusetshenziswa kwemithamo ephezulu ye-acetylsalicylic acid kuhlotshaniswa nengozi enkulu yokopha, umthamo onconyiwe we-acetylsalicylic acid akufanele udlule ku-100 mg. Umphumela onenzuzo omkhulu ubonwa ngenyanga yesi-3 yokwelashwa. Isikhathi esifanele sokwelashwa sale nkomba asinqunywa ngokufanele. Imiphumela yezifundo zemitholampilo iqinisekisa ukuthi kungenzeka ukuthatha i-clopidogrel kuze kube izinyanga eziyi-12 ngemuva kokuqalwa kwesifo esibuhlungu kakhulu se-coronary syndrome ngaphandle kokuphakamisa isigaba se-ST.
I-acute coronary syndrome ene-ST segment elevation (infarction ye-acute myocardial) ekwelashweni kwezidakamizwa kanye nethuba le-thrombolytic therapy, kuhlangene ne-acetylsalicylic acid.
I-Zilt® kufanele ithathwe ngomthamo we-75 mg (i-1 ithebhulethi) kanye ngosuku, ukuqala ngomthamo wokulayisha, kuhlangene ne-acetylsalicylic acid nge-noma ngaphandle kwe-thrombolytics. Ezigulini ezineminyaka yobudala engaphezulu kwengama-75 ubudala, ukwelashwa nge-Zilt® kufanele kwenziwe ngaphandle kokusebenzisa umthamo wokulayisha. Ukwelapha okuhlanganisa kuqalwa ngokushesha okukhulu ngemuva kokuqala kwezimpawu futhi kuqhubeke okungenani amaviki ama-4. Ukusebenza kwezokwelapha okuhlanganiswa ne-clopidogrel kanye ne-acetylsalicylic acid ehlala amasonto angaphezu kwama-4 akufundwanga kulezi ziguli.
I-fibrillation ye-Atrial (fibrillation ye-atrial)
Umuthi i-Zilt® unqunywe kumthamo ka-75 mg kanye ngosuku. Ngokuhambisana ne-clopidogrel, ukwelashwa kufanele kuqalwe bese ukuthathwa kwe-acetylsalicylic acid ngethamo lika-75-100 mg ngosuku kufanele kuqhubeke.
Uma isiguli siphuthelwe umthamo olandelayo:
- Uma sekudlule amahora angaphansi kwayi-12 ngemuva ukweqa umthamo olandelayo, kufanele uthathe ngokushesha umthamo ophuthelwe we-Zilt®, bese uthatha umthamo olandelayo ngesikhathi esijwayelekile,
- Uma sekudlule amahora angaphezu kwayi-12 ngemuva ukweqa umthamo olandelayo, khona-ke kumele kuthathwe umthamo olandelayo ngesikhathi esijwayelekile, kuyilapho umthamo ungafanele uphindwe kabili.
Abantu abadala kanye neziguli esezikhulile ezinomfutho onqunywe ngofuzo we-CYP2C19 isoenzyme
Umsebenzi ophansi we-CYP2C19 isoenzyme uhlotshaniswa nokwehla komphumela we-antiplatelet we-clopidogrel. Ukusetshenziswa kwe-Zilt® kumthamo ophakeme (umthamo wokulayisha ongama-600 mg, bese kuba ngu-150 mg kanye ngosuku) ezigulini ezinomsebenzi ophansi we-CYP2C19 isoenzyme kuholela ekwandeni komphumela we-antiplatelet we-clopidogrel (bheka isigaba sePhemacokinetics). Kodwa-ke, ezivivinyweni zemitholampilo zokufunda imiphumela yemitholampilo, irekhodi elilingene le-clopidogrel ezigulini ezine-metabolism encishisiwe ngenxa yomsebenzi ophansi ophethwe ngofuzo we-CYP2C19 isoenzyme.
Kumavolontiya asebekhulile (iminyaka engaphezu kwengu-75), uma kuqhathaniswa namavolontiya asemasha, umehluko ekuhlanganisweni kweplatelet kanye nesikhathi sokuphuma kwegazi awuzange uvezwe. Ukulungiswa kwedosi ezigulini esezikhulile akudingekile.
Umsebenzi wezinso ongasebenzi kahle
Ngemuva kokusebenzisa okuphindaphindiwe kwe-clopidogrel ngethamo lika-75 mg ngosuku ezigulini ezinenkinga yokulimazeka kwe-renal (CC 5-15 ml / min), izinga lokuvinjwa kokuhlanganiswa kwe-ADP-indeled plateletation lingama-25% eliphansi kunasemisebenzini enempilo. Kodwa-ke, isilinganiso sokwandisa isikhathi sokuphuma kwegazi sasifana nesamavolontiya anempilo athola i-clopidogrel ku-75 mg ngosuku. Ukubekezelelwa kwezidakamizwa kwakulungile kuzo zonke iziguli. Umsebenzi wesibindi okhubazekile
Ngemuva kokusebenzisa i-clopidogrel ngethamo lika-75 mg ngosuku izinsuku eziyishumi ezigulini ezinenkinga yokuqina kwesibindi, izinga lokuvinjwa kokuhlanganiswa kwe-platter ye-ADP kanye nesilinganiso sokusaphaza isikhathi sokuphuma kwegazi kuqhathaniswa nabasebenza ngokuzithandela.
Ukuxhaphaka kwezinsolo zezakhi zofuzo zeCYP2C19 isoenzyme ezihambisana nomthamo ophakathi nendawo noma wehlisiwe kwehluka phakathi kwabamele amaqembu ahlukene ezinhlanga / izinhlanga (bheka iSigatshana seFloracogenetics). Imininingwane yezincwadi ezinomkhawulo iyatholakala ukuhlola ukubaluleka kokuqanjwa kofuzo kwe-CYP2C19 isoenzyme emiphumeleni yomtholampilo weziguli zomjaho waseMongoloid.
Lapho uqhathanisa izakhiwo ze-pharmacodynamic ze-clopidogrel emadodeni nakwabesifazane, abesifazane bakhombisa ukungavinjelwa okuningi kwe-ADP-indened plateletation aggregation, kepha kwakungekho mehluko ekwandeni kwesikhathi sokuphuma kwegazi. Lapho uqhathanisa i-clopidogrel ne-acetylsalicylic acid ezigulini ezisengozini yokuthola izinkinga ze-ischemic, imvamisa yemiphumela yemitholampilo, eminye imiphumela ephambukayo nokuphambuka kokujwayelekile kwemigomo yezokwelapha neyelabhorathri yayifana kwabesilisa nabesifazane.
Imiphumela emibi yesidakamizwa i-Zilt
Ukuphendula okujwayelekile: Ubuhlungu besifuba, ukukhathala, i-asthenia.
Kusuka ohlelweni lwezinzwa: ikhanda, isiyezi, i-paresthesia, umlenze okhubazekile, i-hypesthesia, i-neuralgia, ukulahlekelwa ukwazi.
Kusuka ohlelweni lwezinhliziyo: i-edema yangaphakathi, umfutho wegazi ophakeme (umfutho wegazi ophakeme), ukuhluleka kwenhliziyo, i-tachycardia.
Kusuka ipheshana lesisu: Ubuhlungu besisu, i-dyspepsia, isifo sohudo, isicanucanu, ukuqunjelwa, ukugabha, ukuthokomala, ukuphazamiseka kokunambitha, ukugcwala kwezilonda zesisu, i-gorritis ye-hemorrhagic, ukopha kwesisu.
Engxenyeni yesibindi nepheshana elihlanganisiwe: umsebenzi owengeziwe we-hepatic transaminases, i-hyperbilirubinemia, i-hepatitis, i-steatosis yesibindi.
Kusuka ohlelweni lwegazi: thrombocytopenia, anemia (aplastic noma hypochromic), agranulocytosis, granulocytopenia, leukocytosis, leukopenia, neutropenia.
Kusuka ohlelweni lokuhlangana kwegazi: impumulo, ukopha esiswini, i-hemarthrosis, ukopha okuvela kumgudu wokuchama, i-hemoptysis, i-intracranial hemorrhage, ukopha kwe-retroperitoneal, ukopha kusuka kunxeba lesifo esibuhlungu kakhulu, ukopha kwethambo esweni, i-hemothorax, i-pulmonary hemorrhage, i-allergic factorura, i-thrombocytopenic purpura.
Kusuka ohlelweni lwe-musculoskeletal: izinhlungu emuva, isifo samathambo, i-arthrosis.
Kusukela ohlangothini lwesistimu yezinzwa ephakathi: Ukudana
Kusuka ohlelweni lokuphefumula: ukuvuvukala kwesiqeshana sokuphefumula, ukushuba komoya, i-rhinitis, i-bronchitis, ukukhwehlela, inyumoniya, i-sinusitis.
Uhlangothi lwesikhumba: ukuqubuka, ukulunywa, i-eczema, izilonda zesikhumba, i-dermatitis enenhliziyo, ukuqubuka kwe-erythematous, ukuqubuka kwe-maculopapular, i-urticaria.
Kusuka kwizitho zemizwa: i-cataract, i-conjunctivitis.
Kusuka ohlelweni lwezitho zofuzo: ukutheleleka kwe-urinary tract, i-cystitis, i-hypermenorrhea, amacala aqhelelene we-hemolytic uremic syndrome kanye nephropathy ye-membranous.
Ukuphendula komzimba: amacala angazodwa wempendulo ye-hypersensitivity (angioedema, bronchospasm, anaphylaxis).
Imiyalo ekhethekile yokusebenzisa umuthi i-Zilt
Ezigulini ezine-myocardial infarction, akunconywa ukuqala ukwelashwa nge-clopidogrel ezinsukwini ezimbalwa zokuqala ngemuva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo. IClopidogrel yandisa isikhathi sokuphuma kwegazi. Umuthi kufanele usetshenziswe ngokuqapha ezigulini ezinobungozi obukhulayo bokuphuma kwegazi ngenxa yokuhlukumezeka, ukungenelela kokuhlinzwa noma ezinye izimo ze-pathological, kanye nasezigulini ezinomkhuba wokuphuma kwegazi (ukuphuma kwamathumbu, ukopha kwamehlo). Ukwelashwa nge-Clopidogrel kufanele kuyekwe okungenani izinsuku ezingama-7 ngaphambi kokungenelela kokuhlinzwa okuhleliwe (kufaka phakathi izinqubo zamazinyo).
Iziguli kufanele zixwayiswe ukuthi ngenkathi zelashwa nge-clopidogrel, ubungozi bokuphuma kwegazi bukhuphuka nokuthi ukopha kungahlala isikhathi eside kunokujwayelekile, bese kuyeka ngokungazenzisi. Ukusikeka okuncane (ngenkathi ukushefa) noma okunye ukulimala kwasendlini, izindlela ezikhethekile zokumisa ukopha ngokuvamile azidingeki. Uma kwenzeka ukusikeka noma ukulimala okukhulu, kudingeka ukubonisana okuphuthumayo kwezokwelapha.
Ngenxa yolwazi olwanele nge-clopidogrel ezigulini ezinokulimala kokusebenza kwezintso, kufanele kuqashelwe lapho kusetshenziswa umuthi.
Ngokuphulwa okukhulu komsebenzi wesibindi, ubungozi bokuthi ukopha uyanda, ngakho-ke, kulezi ziguli, i-clopidogrel kufanele isetshenziswe ngokuqapha.
Ukuphepha kanye nokusebenza kahle kwe-clopidogrel ezinganeni nasentsheni engaphansi kweminyaka engu-18 akukasungulwa, ngakho-ke, lesi sidakamizwa asinqunyelwe iziguli zeli qembu leminyaka.
Ngenxa yokuntuleka kwedatha, i-clopidogrel ayinconywa ukuthi isetshenziswe ngesikhathi sokukhulelwa nokuqunjelwa.
Umuthi ungathinta isimo se-psychophysical state, esibonakaliswa wukubambezela ukunakwa, ukwehla kwamandla emizwa kokusebenza kwengqondo futhi kudinga ukuqaphela lapho ushayela izimoto futhi usebenza nezinqubo ezinobungozi.
Ngenxa yengozi eyandayo yokopha, akunconywa ukusetshenziswa kanyekanye kwe-clopidogrel kanye ne-warfarin. Ngokusebenzisa kanyekanye i-clopidogrel ene-heparin noma amanye ama-thrombolytic agents, ingozi yokopha ingakhuphuka, ngakho-ke ukusetshenziswa okuhlangene kwale mithi kudinga ukuqaphela. Ukusetshenziswa kanyekanye kwe-clopidogrel kanye ne-NSAIDs kukhulisa ubungozi besenzo se-ulcerogenic kanye nokukhula kwegazi elivela ezilondeni, ngakho-ke ukusetshenziswa kwe-clopidogrel ene-NSAIDs kudinga ukuqaphela.
Ngokusebenzisa kanyekanye i-clopidogrel ene-atenolol, i-nifedipine, i-digoxin, i-phenobarbital, i-cimetidine, i-estrogen noma i-theophylline. Kukhona ubufakazi bokuphepha kokusetshenziswa kanyekanye kwe-clopidogrel ene-phenytoin ne-tobutamide.
Ama-antacid awathinti ukumuncwa kwe-clopidogrel.
Ukweqisa izidakamizwa Zilt, izimpawu kanye nokwelashwa
Icala eli-1 lokusebenzisa ngokweqile okweqile kwe-clopidogrel lichazwa lapho owesifazane oneminyaka engama-34 onenjongo yokuzibulala ethatha i-1050 mg (amaphilisi ayi-14) e-clopidogrel. Kwakungekho zimpawu zokusetshenziswa ngokweqile noma kwezinkinga, akukho ukwelashwa okukhethekile okwenziwe.
Ngemuva kokuthola amavolontiya anempilo, i-600 mg ye-clopidogrel ayikhombisanga imiphumela emibi (ngaphandle kokukhuphuka kwezikhathi ze-1,7 isikhathi sokuphuma kwegazi).
Ayikho i-antidote ethile. Imiphumela ye-clopidogrel ingaqedwa ngokudluliswa kwe-platelet mass.
umnyombo: into esebenzayo: clopidogrel hydrosulfate 97.875 mg, ibalwe njenge-clopidogrel 75,000 mg, ababukeli: i-lactose, i-anhydrous 108.125 mg, i-cellcose ye-microcrystalline 30,00 mg, isitashi se-pregelatinized 12.00 mg, i-macrogol 6000 8.00 mg, i-castor oil, i-hydrogenated 4.00 mg,
igobolondo: hypromellose 6av 5.60 mg, titanium dioxide (E171) 1.46 mg, talc 0.50 mg, udayi iron oxide obomvu (E 172) 0.04 mg, propylene glycol 0.40 mg.
Round, kancane amacwecwe e-biconvex, ahlanganiswe ngokuhlanganiswa kwefilimu epinki.
* Ukubuka kwesigaba esiphansi: isisindo esimhlophe noma esicishe sibe mhlophe nge-pink film sheath.
I-Clopidogrel iyi-prodrug, enye yama-metabolites asebenzayo okuyi-inhibitor ye-platelet aggregation. I-metabolite esebenzayo ye-clopidogrel ngokukhetha ivimbela ukubopha
i-adenosine diphosphate (ADP) ene-P2YI2 ama-platelet receptors kanye nokwenza kusebenze kwe-ADP-mediated okwalandela kwe-glycoprotein GPIIb / IIIa tata, okuholela ekuvinjelweni kokuhlanganiswa kweplatelet.
Ukucindezelwa kokuhlanganiswa kwe-platelet akunakuphikwa futhi kuyaqhubeka kuwo wonke umjikelezo wokuphila wamaseli (cishe izinsuku ezingama-7 - 7), Ngakho-ke, isilinganiso sokubuyiselwa kokusebenza okujwayelekile kweplathile silingana nezinga lokuvuselelwa kwabo. Ukuhlanganiswa kweplatelet okubangelwa ama-agonists ngaphandle kwe-ADP nakho kuvinjelwe ngenxa yokuvinjwa kokuqalwa kokusebenza kweplatelethi nge-ADP.
I-metabolite esebenzayo yakhiwa isenzo se-CYP450 isoenzymes, ezinye zazo ezingashiyana nge-polymorphism noma zingavinjelwa ezinye izidakamizwa, ngakho-ke, akuzona zonke iziguli ezinokuvinjwa okwanele kokuhlanganiswa kweplatelet.
Ekwelashweni nge-clopidogrel ngomthamo ka-75 mg ngosuku kusuka ngosuku lokuqala lokwelashwa, kunokucindezelwa okukhulu kwe-ADP-indped platelet aggregation, ekhuphuka kancane kancane ngaphezulu kwezinsuku ezingama-3-7 bese ifinyelela ezingeni eliqhubekayo (lapho kufinyelelwa ukulingana). Esimweni sokulingana, izinga lokuvinjwa kokuhlanganiswa kweplatelethi lapho usebenzisa i-clopidogrel ku-75 mg mg ngosuku, ngokwesilinganiso, ukusuka ku-40% kuya ku-60%. Ngemuva kokumisa i-clopidogrel, ukuhlanganiswa kweplatelet kanye nesikhathi sokuphuma kwegazi kancane kancane kubuyela kumanani abo okuqala, ngokwesilinganiso, ngaphezulu kwezinsuku ezi-5.
I-Clopidogrel ingavimbela ukuthuthukiswa kwezinkinga ze-atherothrombotic ezigulini ezine-atherosulinotic vidores of cherooma iyiphi indawo, ikakhulukazi lezo ezinemithambo ye-cerebral, coronary or peripheral.
Ngemuva kokuphathwa komlomo okukodwa okuphindaphindwe kabili ngomthamo we-75 mg ngosuku
i-clopidogrel idonswa ngokushesha. Amanani amaphakathi wokuhlungwa okuphezulu (CmAh) i-clopidogrel engashintshiwe ku-plasma yegazi (2.2-2.5 ng / ml ngemuva kokufakwa kumthamo owodwa ka-75 mg) itholakala ngemuva kwemizuzu engaba ngu-45. Ngokusho kocwaningo lokufakwa kwezinso kwe-clopidogrel metabolites, izinga lokufakwa cishe ku-50%.
I-Clopidogrel kanye ne-metabolite yayo enkulu engasebenzi ejikeleza ngeplasma ibopha ngokunamathela kumaprotheni e-plasma womuntu ngaphansi kwezimo in vitro (98% no-94%, ngokulandelana). Lesi sibopho asihlanganisiwe ezinhlobonhlobo zokugxila.
I-Clopidogrel isetshenziswe kahle kusibindi. Ezimweni in vitro futhi ku-vivo
i-clopidogrel isungulwe ngezindlela ezimbili: eyokuqala iqondaniswe ngama-esterases futhi iholela ku-hydrolysis ngokwenziwa kwe-metabolite engasebenzi - okukhishwe kwe-carboxylic acid (85% yama-metabolites ajikelezayo), kanti okunye kubangelwe ama-isoenzymes ahlukahlukene we-cytochrome P450. Ekuqaleni
i-clopidogrel iguqulwa ibe yi-metabolite ephakathi - 2-oxo-clopidogrel. I-metabolism eyalandela ye-2-oxo-Clopidogrel iholela ekwakhekeni kwe-metabolite esebenzayo ye-clopidogrel - i-thiol esuselwa ku-clopidogrel. E-vitro, le ndlela ihlanganiswa yi-isoenzymes CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2 ne-CYP2B6. I-thiol metabolite esebenzayo ye-clopidogrel ehlukaniswe ngaphansi kwezimo in vitro, ngokushesha futhi ngokungenakuphikiswa kuxhumana nama-receptor ama-platelet, ukuvimba ukuhlanganiswa kwawo.
NgemAh i-metabolite esebenzayo ku-plasma yegazi ngemuva kokuthatha umthamo wokulayisha (300 mg) we-clopidogrel iphindwe kabili kune-CmAh ngemuva kwezinsuku ezingama-4 zokusebenzisa i-clopidogrel ku-umthamo wokulungisa (75 mg / ngosuku). NgemAh ku-plasma yegazi itholakala cishe imizuzu engama-30-60 ngemuva kokuthatha umuthi.
Ngemuva kokungena kwe-Clopidogrel eyi-14, cishe u-50% womsakazo wonke ukhishwa yizinso futhi cishe u-46% wamathumbu kungakapheli amahora angama-120 ngemuva kokudonswa. Ngemuva kokuphathwa komlomo okukodwa kwe-clopidogrel ku-75 mg mg, i-half-life (T1/2) cishe amahora angama-6. T1/2 i-metabolite esemqoka engasebenzi ejikeleza ngeplasma yegazi ngemuva kokusebenzisa kanye nokuphindaphindiwe amahora angama-8.
I-isoenzyme CYP2C19 ibamba iqhaza ekwakhekeni kwe-metabolite esebenzayo kanye ne-metabolite ephakathi - 2-oxo-clopidogrel. Umphumela we-pharmacokinetics kanye ne-antiplatelet ye-clopidogrel metabolite esebenzayo, kanye nemiphumela yokuhlolwa kokuhlanganiswa kwe-platelet ngaphansi kwezimo ze-ex vivo, ziyahlukahluka ngokuya nge-genotype ye-CYP2C19 isoenzyme.
I-allele ye-CYP2C19 * 1 isoenzyme gene ifana nomzimba osebenza ngokugcwele, kanti izinhlobo ze-CYP2C19 * 2 no-CYP2C19 * zingu-3 isoenzyme azisebenzi. I-Alleles ye-CYP2C19 * 2 ne-CYP2C19 * 3 isoenzyme inesibalo sokwehla kometabolism in iningi labamele izinhlanga zeCaucasoid (85%) neMongoloid (99%). Ezinye izinsolo ezihambisana nokuntuleka noma ukwehla kometabolism azivamile futhi zifaka, kepha azikhawulelwe, kuma-genes we-CYP2C19 * 4, * 5, * 6, * 7 no * 8 isoenzyme genes.
Iziguli ezinomsebenzi ophansi we-CYP2C19 isoenzyme kufanele zibe nezinsimbi ezimbili zomsebenzi oshiwo ngenhla ngokulahleka komsebenzi. Ngokusho kwezifundo ezishicilelwe, imvamisa yama-genotypes enomsebenzi ophansi we-CYP2C19 isoenzyme, ehambisana nokuncipha kometabolism, icishe ibe yi-2% kubamele umjaho weCaucasoid, u-4% kubantu bomjaho weNegroid no-14% kubantu bohlanga lwamaMongoloid. Kukhona ukuhlolwa kokuthola uhlobo lwe-CYP2C19 isoenzyme. Ngokusho kocwaningo kanye nokuhlaziywa kwe-meta, okubandakanya abantu abanomsebenzi ophakeme kakhulu, ophakeme, ophakathi nendawo ophansi we-CYP2C19 isoenzyme, umehluko omkhulu ekuvezweni kwe-metabolite esebenzayo kanye nesilinganiso esiphakathi sokuvinjwa kokuhlanganiswa kweplathile ye-ADP-inedu izisebenzi zokuzithandela ezinesilinganiso esiphakeme kakhulu, esiphakeme nesiphakathi somsebenzi I-CYP2C19 ibingekho. Kwivolontiya elinomsebenzi ophansi wale isoenzyme, ukubonakaliswa kwe-metabolite esebenzayo kunciphile uma kuqhathaniswa namavolontiya anemisebenzi ephezulu ye-isoenzyme CYP2C19.
Lapho usebenzisa i-clopidogrel ngemithamo ye-600 mg, umthamo wokulayisha / umthamo wokulungiswa we-150 mg (i-600 mg / 150 mg) ezigulini ezinomzimba ophansi, ukubonakaliswa kwe-metabolite esebenzayo kwakuphakeme kunendlela yokuthola ukwelashwa eyi-300 mg / 75 mg. Ngaphezu kwalokho, izinga lokuvinjwa kokuhlanganiswa kweplateletle lalifana nalawo emaqenjini eziguli ezinomsebenzi ophakeme we-CYP2C19 isoenzyme ethola
i-clopidogrel ngokohlelo lwe-300 mg / 75 mg. Kodwa-ke, irejimeni yemithamo ye-clopidogrel eqenjini leziguli elinomsebenzi ophansi we-CYP2C19 isoenzyme ayinqunywa ezifundweni ezibandakanya ukucwaninga kwemiphumela yemitholampilo. Izilingo zemitholampilo ezenziwe kuze kube manje zinosayizi onganele wesampula ukuthola umehluko emiphumeleni yomtholampilo ezigulini ezinomsebenzi ophansi we-CYP2C19 isoenzyme.
I-Pharmacokinetics yamaqembu akhethekile eziguli
I-pharmacokinetics ye-metabolite esebenzayo ye-clopidogrel emaqenjini akhethekile weziguli (iziguli esezikhulile, izingane, iziguli ezinokulimala kwe-renal nomsebenzi we-hepatic) azifundwanga.
Ngemuva kokusebenzisa okuphindaphindiwe kwe-clopidogrel ngethamo lika-75 mg ngosuku ezigulini ezinenkinga yokulimazeka kwe-renal (CC 5-15 ml / min), izinga lokuvinjwa kokuhlanganiswa kwe-ADP-indeled plateletation lingama-25% eliphansi kunasemisebenzini enempilo. Kodwa-ke, isilinganiso sokwandisa isikhathi sokuphuma kwegazi sasifana nalezo zokuzithandela ezinempilo ezamukelwayo
i-clopidogrel ku-75 mg ngosuku.
Umsebenzi wesibindi okhubazekile
- I-Hypersensitivity to clopidogrel noma yikuphi okutholayo okwakha umuthi,
- ukungasebenzi kahle kwesibindi,
- ukopha kakhulu, njengokuphuma kwe-peptic ulcer noma i-intracranial hemorrhage,
- Ukushoda kwe-lactase, ukungabekezeleli kwe-lactose, i-glucose-galactose malabsorption syndrome,
- ukukhulelwa nesikhathi sokuncelisa,
- Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-18 ubudala (ukuphepha nokusebenza kahle akusungulwa).
- Umsebenzi wesibindi olinganiselayo onesiphazamiso ukopha (isipiliyoni esilinganiselwe)
- Umsebenzi we-renal okhubazekile (isipiliyoni esilinganiselwe)
- izimo zokugula okwandisa ingozi yokopha (kufaka phakathi usizi, ukuhlinzwa (bheka isigaba "Imiyalo ekhethekile"),
- Izifo lapho kunesisekelo sokukhula kwegazi (ikakhulukazi esiswini kanye ne-intraocular),
- ukusetshenziswa kanyekanye nezidakamizwa ezingezona ze-anti -idalidal (i-NSAIDs), kufaka phakathi i-cycloo oxygenase-2 inhibitors (COX-2),
- ukusetshenziswa kanyekanye kwe-warfarin, heparin noma i-glycoprotein IIb / IIIa inhibitors,
- iziguli ezinomsebenzi ophansi we-CYP2C19 isoenzyme (lapho kusetshenziswa ama-clopidogrel emithanjeni enconyiwe, i-metabolite engasebenzi kakhulu ye-Clopidogrel iyakhiwa futhi umphumela wayo we-antiplatelet awukhulunywa kangako, ngakho-ke, lapho usebenzisa i-clopidogrel kwimithamo enconyiwe ye-acute coronary syndrome noma ukungenelela kwe-percutaneous ku-coronary artery, kungahle kube nokushaya kwenhliziyo ephezulu kuneziguli ezinomsebenzi ojwayelekile we-isoenzyme CYP2C19),
I-hypersensitivity kwamanye ama-thienopyridines (isb.
i-ticlopidine, prasugrel) (bheka isigaba "Imiyalo ekhethekile").
Njengoba kungekho datha emtholampilo ngokusetshenziswa kwe-clopidogrel ngesikhathi sokukhulelwa, lesi sidakamizwa asinconywa ukuthi sisisebenzise ngesikhathi sokukhulelwa. Izifundo zezilwane azikaze ziveze imiphumela emibi ngqo noma engaqondile ekukhulelweni, ukukhula kombungu / isibeletho, inkambo yokubeletha noma yokubeletha.
Izifundo zezilwane zikhombisile lokho
I-clopidogrel kanye / noma ama-metabolites ayo akhishwa ubisi lwebele. Ngakho-ke, uma kunesidingo, ukwelashwa
I-clopidogrel om inconyelwe ukumisa ukuncelisa ibele.
i-clopidogrel ku-75 mg ngosuku. Ukubekezelelwa kwezidakamizwa kwakulungile kuzo zonke iziguli. Umsebenzi wesibindi okhubazekile
Ukuphepha kwe-clopidogrel kuphenyiwe ezigulini ezithola ukwelashwa kwe-clopidogrel unyaka owodwa noma ngaphezulu. Ukuphepha kwe-clopidogrel ngethamo lika-75 mg ngosuku kwakuqhathaniswa nalokho nokusetshenziswa kwe-acetylsalicylic acid ngethamo lika-325 mg ngosuku, kungakhathalekile ubudala, ubulili kanye nohlanga. Imiphumela emibi ebonwe ekuvivinyweni kwemitholampilo ifakwe kuhlu ngezansi. Ngaphezu kwalokho, imibiko yokuzenzakalelayo yokuphendula okubi ikhonjisiwe.
Ezifundweni zemitholampilo nokubhekwa kwe-post-advertising, i-clopidogrel imvamisa ibike ukuthuthukiswa kokopha, ikakhulukazi ngenyanga yokuqala yokwelashwa.
Ukuhlukaniswa kwezigameko zemiphumela emibi ye-World Health Organisation (WHO): kaningi? 1/10, kuvame ukusukela? 1/100 kuye ku-1/10000 kuye
Ifomu lomthamo - amaphilisi aphekwe ngefilimu: isiyingi, i-biconvex encane, epinki, umgogodla wethebhulethi unesakhiwo esimhlophe noma esicishe sibe mhlophe (7 emabhulashini, emaphepheni amakhadibhodi we-2, 4 noma 12 amanxeba).
Into esebenzayo yi-clopidogrel hydrosulfate, kuthebhulethi eyi-1 - 97.875 mg, noma i-clopidogrel - 75 mg.
Izakhi ezisizayo: i-microcrystalline cellulose, i-lactose ene-anhydrous, isitashi pregelatinized, uwoyela we-hydrogenated castor, i-macrogol 6000.
Ukwakheka kwengubo yefilimu: i-propylene glycol, hypromellose 6cp, talc, titanium dioxide (E171), idayi oxide ebomvu (E172).
Inkampani yezamayeza ebibambe iqhaza ekwenziweni kwemithi yeZilt eRussia KRKA. Futhi, emakethe yasekhaya, kwesinye isikhathi ungathola umuthi ongenisiwe ohlinzekwa usuka eSlovenia.
Kuyinto "Zilt", ngeshwa, iyabiza impela. Intengo yalesi sidakamizwa incike, okokuqala, kunani lamabhulashi afakwe ebhokisini. Isibonelo, amaphilisi angu-14 alo mkhiqizo abiza cishe ama-500-600 r, kuya ngomhlinzeki. Kumabhulashi ayi-12, kuzodingeka ukhokhe ngaphezulu kwe-2000 p. Kunoma yikuphi, lesi sidakamizwa sihlakazwa emakhemisi kuphela ngomuthi obhaliwe.
Endaweni yokulimala kwemithambo emzimbeni womuntu, ama-platelet njalo aqala ukuqongelela. Ngasikhathi sinye, banamathela ndawonye futhi banamathela izicubu. Le nqubo iphetha ngokwakhiwa kwejazi legazi.
Umuthi "i-Zilt", imiyalo yokusebenzisa elula impela, uqala ukusebenza kahle esigulini ngokushesha okukhulu - cishe imizuzu engama-30 ngemuva kokuphathwa. Uma ingena emzimbeni womuntu, kuvimbela izithako zokuhlanganiswa kweplatelet. Ngokusetshenziswa njalo kwalesi sidakamizwa ngemuva kwezinsuku ezingama-4-7, umphumela omkhulu wokwelapha uvela.
Iqoqo eliphakeme lomuthi emzimbeni lenzeka emahoreni ambalwa emva kokuphathwa. Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe kwawo kusegazini ngisho nalesi sikhathi kuvame impela kuphansi.
Umuthi ukhishwa emzimbeni zombili izinso namathumbu. Isikhathi sokuphila ngemuva komthamo owodwa cishe amahora angama-6-8.
Umuthi "i-Zilt": imiyalo esetshenzisiwe
Lo muthi uyatholakala, njengoba sekushiwo, kuphela ngendlela yamaphilisi. Ngokuvumelana nalokho, bakusebenzisa kuphela ngomlomo. Iziphuzo zamathebulethi i-75 mg "Zilt" yokusebenzisa isetshenziswa ngaphambi kokudla, nangemva kokudla noma phakathi nayo. Izindlela zokuthatha lo muthi zincike kwisifo esithile.
Isiguli esiphethe i-myocardial infarction sivame ukubekwa kwethebhulethi elilodwa le-75 mg ngosuku. Imithamo efanayo ibekelwe iziguli ezinengozi ye-ischemic cerebrovascular and occlusion ye-arterial. Kulokhu, ezigulini ezine-myocardial infarction, lo muthi ungabekwa ngesikhathi kusuka ezinsukwini ezi-1 kuye kwezingu-35 zokukhula kwalesi sifo. Iziguli ezinesifo sohlangothi lwe-ischemic "Zilt" zivame ukunqunywa kusuka ezinsukwini eziyisikhombisa kuya ezinyangeni eziyisithupha.
Kwi-coronary syndrome ene-ST segment elevation, lo muthi futhi unqunyelwe ngenani lama-75 mg ngosuku. Kodwa kulokhu, isiguli ngaphambili sithatha umthamo owodwa wokulayisha uhlanganiswe ne-aspirin ne-thrombolytics.
Ku-coronary syndrome ngaphandle kokuphakama kwe-ST, kusetshenziswa uhlobo oluthile lokwelashwa oluhlukile. Kulokhu, umuthi uvame ukuthathwa ngale ndlela elandelayo:
phuza umthamo wokulayisha we-300 mg kanye
phuza umuthi nsuku zonke kwithebhulethi elingu-1 ngosuku.
Ngaphezu kwalokho, ngokuhambisana nemithi kanye ne-aspirin enanini lama-75-325 mg, umthamo wosuku we-Zilt kufanele ube ngu-100 mg. Ngalesi irejimeni, umphumela omkhulu ezigulini uvame ukubonwa ngemuva kwezinyanga ezintathu. Inkambo yokwelashwa imvamisa iyizinyanga eziyi-12.
Ukwelashwa okunjalo kunqunyelwe ezimweni eziningi kuphela ezigulini ezindala ezingaphansi kweminyaka engama-75.
Imiyalo yokusetshenziswa kwesidakamizwa "Zilt": contraindication
Kwentsha engaphansi kweminyaka engu-18 ubudala, i- “Zilt” ayinqunyelwe ukuvimbela i-thrombosis. Akunconywa nokuthi uthathe lo muthi kubantu abancelayo nabesifazane abakhulelwe. IClopidogrel iyakwazi ukungena, kufaka phakathi, kubisi lwebele.
Vele, awukwazi ukuthatha lesi sidakamizwa nalabo bantu abangase bahlakulele ukungahambi kahle kunoma yiziphi izingxenye zawo. Ingabe ukwephulwa kokusetshenziswa kwe- "Zilt":
Ngokusho kwemiyalo esetshenzisiwe, "i-Zilt" kufanele ithathwe ngokuqapha lapho kunezinkinga ezinjengokuthi:
hypersensitivity to thienopyridines,
umsebenzi ophansi we-CYP2C19,
izifo lapho ukopha kungenzeka khona,
ukuhlinzwa nokulimala okungadala ukopha.
Ngaphezu kwalokho, ngokuqapha kufanele kuthathwe, ngokuya ngemiyalo yokusebenzisa, "Zilt" 75 mg ngasikhathi sinye ngezindlela ezinjengokuthi:
Okufanayo kusebenza ekwelashweni okuyinkimbinkimbi nezidakamizwa ezingezona ezika-Zidal kanye ezingezona ze-steroidal.
Umphumela wokuphuza lo muthi ungancipha uma isiguli sathola ukwelashwa sisebenzisa:
I- "Ticlopidine" nezinye izidakamizwa.
Iziguli ezithatha i-Zilt kufanele nakanjani zinamathele kulezi zincomo ezilandelayo:
Amacala okwenziwa okungajwayelekile kwendawo noma isikhathi ukopha kufanele abikwe kudokotela,
odokotela bamazinyo nodokotela abahlinzayo kufanele baziswe ngenkambo yokwelashwa noZilt uma bethintwa.
Imiphi imiphumela emibi engahle yenzeke
Njenganoma yimuphi omunye umuthi, i-Zilt ingaba nomthelela ongemuhle emzimbeni wesiguli. Imvamisa, lapho kudlula isifundo usebenzisa lo muthi, imiphumela elandelayo elandelayo ibonwa ezigulini:
Ubuhlungu besisu nohudo,
Kwesinye isikhathi, labo abaphuza lo muthi bangabonakala futhi:
ukulunywa noma i-purpura
Ekuhlolweni kwegazi elebhu, ukwehla kwenani lamaplatelet nama-neutrophils kwesinye isikhathi kungatholakala ezigulini.
Ngakho-ke, kunemiphumela eminingana emisha kulo muthi. Ngakho-ke, imiyalo yokusebenzisa i- "Zilt" 75 mg kufanele ibonwe ngaphandle kokuhluleka. Ama-overdose alo muthi, yiqiniso, awakwazi ukubekezelelwa. Uma isiguli sikhohlwa ukuphuza iphilisi ngolunye usuku, ukuphuza umthamo ophindwe kabili ngosuku olulandelayo akunconywa kunoma yikuphi.
Ngokusho kwemiyalo esetshenzisiwe, amaphilisi we-Zilt, njengawo wonke amanye, akufanele aphuzwe uma ungahambisani nanoma yiziphi izingxenye zawo. Ukusabela okunjalo lapho usebenzisa lesi sidakamizwa akuvamile. Kepha kwesinye isikhathi ukungezwani neziguli ezelashwa kusetshenziswa le khambi kusengabonakala. Ukuphendula okuvame kakhulu yilokhu:
Ukuthi wenzani nge-overdose
Ukusebenzisa umuthi ngephula imiyalo yokusebenzisa i- "Zilt" kuholela ekutholakaleni kwezinkinga ezinjengokuthi:
ukopha kwemvelo ehlukile,
isikhathi sokuphuma kwegazi.
Ukwelashwa ngokweqile ngalo muthi kuwuphawu. Iziguli zivame ukumpontshelwa nge-platelet mass.
Kubiza i- "Zilt", njengoba sekushiwo, kubiza kakhulu. Ngakho-ke, iziguli eziningi, yiqiniso, zinesifiso sokuthi yisiphi isidakamizwa esishibhile esingangena esikhundleni salo muthi uma kunesidingo.
Izithonjana zomuthi "uZilt", ngokwesibonelo:
Zonke lezi zimali ekwakhekeni kwazo zinento efanayo esebenzayo ne-Zilt. Uma ufisa, lesi sidakamizwa singashintshwa nganoma yisiphi isikhathi ngesinye sezithonjana ezisohlwini. Imiyalo yokusebenzisa neZilt kanye namagama asetshenziswayo cishe acishe afane. Le mishanguzo inciphisa ukugcuka kwegazi ngempumelelo. Kodwa-ke, kusavunyelwe ukuguqula iZilt kunoma iyiphi yalezi zifaniso ngemuva kokubonisana nodokotela okokuqala.
IGenerikhi "iZilt" yimithi "Clopidogrel" (ibiza 190 p. Ama-pcs ayi-14) kanye no "Clopidogrel Richter" (292 p).
Izimpikiswano zalo muthi, futhi ezivimbela ukwanda kwegazi, imi ngalendlela elandelayo:
"I-Phenilin" ichazwa iziguli ku-0,025-0.1 g izikhathi ezingama-1-3 ngosuku. Iziguli zingathatha i-Dicumarin kwimithamo ukusuka ku-0,05 kuye ku-0,1 g izikhathi ezingama-2-3 ngosuku. Odokotela banquma i-Heparin ezigulini ngokungaziphathi, ngokuhlinzwa noma ngaphakathi.
Futhi, umuthi "Plavix" ubhekise kwizifanekiselo zalo muthi. "I-Zilt", imiyalo yokusetshenziswa kwayo esesiyibukezile ngenhla, empeleni, ngokwayo ingumsebenzi oshibhile kulo muthi. Iziguli eziningi, ezinikezwe isamba esanele sezimali, ziyalulekwa ukuba zikhethe i-Plavix ekuvinjelweni kwe-thrombosis. Mayelana nokusebenza kahle, iZilt ingaphansi kancane kulo muthi omkelwayo.
Kuyiqiniso, ukuthatha ukuvimbela izingqimba zegazi kufanele kube kuphela izidakamizwa ezingasebenzi "Zilt". Kunconywa ukugcina lo muthi emazingeni okushisa aze afike ku- +25 ° C. Okusho ukuthi, ehlobo kuyinto efiselekayo ukubeka lezi zibhebhe esiqandisini. Impilo yeshelufu lomuthi ekupakweni okwenziwe uphawu yiminyaka emi-3.
Ukubuyekezwa mayelana nekhambi elivela ezigulini
Iziguli zinombono omuhle kakhulu ngalo muthi. Iziguli zihlobene nezinzuzo zako:
ukuntuleka kwemiphumela emibi esiswini.
Lo muthi ufafaza igazi, ngokusho kweziguli eziningi, lingcono kakhulu kune-aspirin efanayo. Okusho ukuthi, ubungozi bokuhlaselwa yizinhliziyo okuphindaphindiweyo noma ukuhlaselwa yisifo sohlangothi lapho sisetshenziswe ngokuqinile ngokuya ngemiyalo yokusebenzisa, i-Zilt, ukubuyekezwa okuthi kulokhu kulunge kakhulu, kunciphisa kakhulu.
Okunye ukungahambi kahle kwalo muthi, iziguli zicabanga:
ukungafakwa kahle kakhulu.
Ukuhlaselwa yinhliziyo nemivimbo kwenzeka, vele, kubantu abaneminyaka ephakathi. Kepha kaningi kunalokho, abantu asebekhulile basabhekene nale nkinga. Futhi-ke, ukuthenga umuthi wokubiza umhlalaphansi obiza kangaka ngokuvamile kunzima.
Amathebhulethi eZake ahlanganiswa emabhulashini ewa ezandleni zodwa. Mhlawumbe umenzi ngaleyo ndlela wayefuna ukwenza ukusetshenziswa kwomuthi nsuku zonke kube okulula. Kodwa-ke, ngokusho kweziguli eziningi, kungangcono kakhulu ukukhipha la maphilisi emabhulashini aqinile emgqeni wokuqhuma.
Okunye ukungathandeki komuthi weZilt ukuthi iziguli eziningi ziwuthatha njengomphumela onamandla esibindini. Iningi leziguli leluleka ukuthatha lo muthi kuphela ngaphansi kokubhekwa udokotela.
Bacabangani odokotela ngalo muthi
Odokotela uqobo nabo babheka i-Zilt njengendlela enhle yokunciphisa ukuguquguquka kwegazi. Ama-plus alo muthi, odokotela bathi ngokuyinhloko ibekezelelwa iqiniso lokuthi ibekezelelwa kahle yiziguli eziningi. Uma kuqhathaniswa nokubuyekezwa, ama-hemorrhages ngesikhathi sawo asetshenziswa kakhulu.
Isisekelo sobufakazi maqondana nokuphepha kanye nokusebenza kahle kwalesi sidakamizwa, njengoba iningi lodokotela siphawula, lihle kakhulu. Kodwa-ke, bakholelwa ukuthi lesi sidakamizwa sisenkingeni enkulu. Odokotela bayazincomela ukuthi bangazindli ngokusetshenziswa kwayo.
Imiyalo yokusebenzisa i-Zilt: indlela nomthamo
Izibhebhe ziphuzwa ngomlomo, kungakhathalekile ukuthi kudliwani.
Umthamo onconyelwe iziguli ezinemisebenzi ejwayelekile ye-CYP2C19 isoenzyme, kufaka phakathi iziguli esezikhulile:
I-Myocardial infarction, isifo sohlangothi lwe-ischemic noma isifo se-peripheral arterial occlusion: 75 mg kanye ngosuku,
I-acute coronary syndrome ngaphandle kokukhuphuka kwengxenye ye-ST (i-angina engazinzile ne-myocardial infarction ngaphandle kwe-Q wave): umthamo wokulayisha - kanye ama-300 mg, bese kuba ngu-75 mg kanye ngosuku ngokuhlanganiswa ne-acetylsalicylic acid ngethamo lika-75-325 mg ngosuku. Lapho unquma, kufanele kukhunjulwe ukuthi imithamo ye-acetylsalicylic acid ngaphezulu kwe-100 mg ihlotshaniswa nengozi enkulu yokuphuma kwegazi. Umphumela wokwelapha wenzeka ngenyanga ye-3 yokwelashwa, ukuthola imiphumela efanelekile, kungakuhle ukuthi uqhubeke usebenzise i-clopidogrel kuze kube izinyanga eziyi-12,
I-acute myocardial infarction (i-acute coronary syndrome ene-ST segment ukuphakama): umthamo owodwa wokulayisha, bese kuba ngu-75 mg kanye ngosuku ngokuhlanganiswa noma ngaphandle kwe-acetylsalicylic acid ne-thrombolytics. Akunconywa ukusebenzisa imithamo yokulayisha ekwelashweni kweziguli ezingaphezulu kweminyaka engama-75. Ukwelashwa kufanele kuqalwe lapho kuvela izimpawu zokuqala zesifo futhi kuqhubeke okungenani amaviki ama-4,
I-Atrial fibrillation (i-atrape fibrillation): 75 mg kanye nsuku zonke ngokuhlanganiswa ne-acetylsalicylic acid ngethamo lika-75-100 mg ngosuku.
Kunconywa ukuthatha amaphilisi ngasikhathi sinye, uma usuphuze isikhathi esingaphansi kwamahora ayi-12, kufanele uthathe umthamo ophuthelwe futhi olandelayo ngesikhathi esijwayelekile, ngesikhawu phakathi kokukhipha imithamo yamahora angaphezu kwayi-12 - umthamo olandelayo uthathwa ngaphandle kokuphindeka kabili.
Ezigulini ezinomsebenzi onqunyelwe ngofuzo we-CYP2C19 isoenzyme lapho kuthathwa i-Zilt ngemithamo enconyiwe, ukwakheka kwe-metabolite esebenzayo ye-clopidogrel kwenzeka kancane futhi umphumela wayo we-antiplatelet awubizwa kangako. Umthamo ofanele weziguli zalesi sigaba awukasungulwa, imvamisa, umuthi ubekelwa kumthamo omkhulu ngethamo elilodwa lomthamo wokulayisha ongama-600 mg bese kuba ngu-150 mg kanye ngosuku.
Iziguli esezikhulile azidingi ukulungiswa kwamthamo.
Kusuka ohlelweni lwezinhliziyo: kaningi - i-hematoma, kuyaqabukela - hypotension ye-arterial, vasculitis,
Kusukela ohlelweni lwe-hematopoietic: kaningi - i-leukopenia, i-thrombocytopenia, i-eosinophilia, kuyaqabukela i-neutropenia, kufaka phakathi amafomu anamandla, kuyaqabukela kakhulu i-aplastic anemia, i-thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP), i-pancytopenia, i-thrombocytopenia, i-agranulocytosis, i-agranulocytosis, i-anemocionosis
Ukusuka ohlelweni lokugaya ukudla: kaningi - Ubuhlungu besisu, ukopha esiswini, uhudo, i-dyspepsia, imizwa engejwayelekile - isicanucanu, ukuhlanza, ukuqunjelwa, isifo sofuba, ukuqaqamba kwezilonda zesisu kanye / noma isilonda se-duodenal, kuyaqabukela - i-hemorrhage yesisu, akuvamile - i-pancreatitis, ukopha okubuyayo kanye nokwesiswini (kufaka umphumela obulalayo), i-colitis (kufaka phakathi i-lymphocytic), ukwehluleka kwesibindi, i-hepatitis, ukuphazamiseka kwesibindi kwesibindi, i-stomatitis,
Kusukela ohlangothini lwesistimu yezinzwa: kaningi - ikhanda elibuhlungu, ukuphuma kwesibindi kwethracranial (kufaka nomphumela obulalayo), isiyezi, i-paresthesia, kuyaqabukela - ukudideka, ukukhishwa kwemizwa,
Ukusuka ohlelweni lwe-musculoskeletal: akuvamile kakhulu - i-hemarthrosis, i-hemorrhage yemisipha, isifo samathambo, i-myalgia, i-arthralgia,
Ukusuka ohlelweni lokuphefumula: kaningi - ama-nosebleeds, akuvamile kakhulu - i-bronchospasm, ukopha okuphuma epheshinini lokuphefumula (pulmonary hemorrhage, hemoptysis), pneumonitis ephakathi nendawo,
Ukusuka ohlelweni lwezitho zofuzo: kaningi - i-hematuria, kuyaqabukela - i-glomerulonephritis, i-serum creatinine okuhlushwa,
Engxenyeni yesikhumba: imvamisa - ama-hematomas angamakhambi, okuvamisile - ukulunywa kwesikhumba, ukuqunjelwa, isikhumba (isikhumba), akuvamile - i-bullous dermatitis (i-Stevens-Johnson syndrome, ubuthi be-epidermal necrolysis, i-erythemaous rash, i-lichen planus, eczema
Kusuka kwizitho zemizwa: kaningi - ama-hemorrhages angabonakali noma ahlanganayo, kuyaqabukela - i-vertigo, kuyaqabukela - ukunambitheka kwe-pathologies,
Izinkomba zaselabhorethri: kaningi - ukwehla kwenani lamapuleti nama-neutrophils, kunwebisa isikhathi sokuphuma kwegazi,
Imiphumela yokungezwani komzimba: ukuvela okungafani kakhulu - i-eczema, i-angioedema, ukusabela kwe-anaphylactoid, ukugula kwe-serum, imvamisa engaziwa - ukuqubuka kwezidakamizwa nezimpawu zesistimu ye-DRESS syndrome kanye ne-eosinophilia, i-hypersensitivity ye-hypenensitivity ye-thienopyridines, i-hypersensitivity ye-drug-ikiwa.
Okunye: kaningi - ukuphuma kwe-vascular endaweni yokubhoboza, kuyaqabukela - ukopha kakhulu kusuka enxebeni lokuhlinzwa, umkhuhlane.
Ngokwemiyalo, i-Zilt ayinconyelwanga ukusetshenziswa ngesikhathi sokukhulelwa, ngoba akukho datha emtholampilo yokusetshenziswa kwe-clopidogrel kwabesifazane abakhulelwe. Ucwaningo lwezilwane aluzange luveze noma yimiphi imiphumela emibi eqondile noma engaqondile yomuthi ekukhulelweni, ekukhuleni kwengane, ekuzalweni kwengane, noma ekukhuleni kwengane ngemuva kokubeletha.
Ocwaningweni lokuhlolwa kwezilwane, kwatholakala ukuthi i-clopidogrel nama-metabolites ayo angena ebisini lwebele, ngakho-ke, uma kunesidingo sokusebenzisa i-Zilt kwabesifazane abahlengikazi, ukuncelisa amabele kufanele kumiswe.
Ngomsebenzi wokuphazamiseka wezinso
Ngokusebenzisa okuphindaphindiwe kweZeke ngethamo lika-75 mg ngosuku ezigulini ezinokulimala kokuqina kwe-renal (imvume ye-creatinine - 5-15 ml / min), isilinganiso sokucindezela kokuhlanganiswa kweplatheli sasingama-25% ngaphansi kwesilinganiso sokuvinjwa kokuhlanganiswa kweplatelet eqhathaniswa namavolontiya anempilo. Kodwa-ke, ukwandiswa kwesikhathi sokuqhuma kwegazi bekufana nalokho kumavolontiya anempilo athola umuthi ngomuthi ka-75 mg ngosuku. Ukubekezelelwa kwe-Zilt kuhle ngokufanayo kuzo zonke iziguli.
Ngenxa yengozi ephezulu yokuqhamuka kwegazi, akunconywa ukuba unikeze umuthi ngasikhathi sinye ne-warfarin, futhi uma uhlanganiswa ne-heparin namanye ama-thrombolytic agents, ukunakekelwa okukhethekile kufanele kuthathwe.
Ama-NSAID andisa ingozi yezilonda kanye nokuphuma kwe-ulcerative emgodini wesisu.
Akukho ukusebenzisana okubaluleke kakhulu komtholampilo okutholakele ngokusetshenziswa kanyekanye ne-atenolol, i-angiotensin-converting enzyme (ACE), izidakamizwa ezokwehlisa i-cholesterol yegazi, digoxin, nifedipine, phenobarbital, estrogens, cimetidine, theophylline.
I-Clopidogrel inganyusa umphumela we-acetylsalicylic acid ku-collagen-indased platelet aggregation. Ukusebenzisana kwe-pharmacodynamic yesidakamizwa nge-acetylsalicylic acid kukhulisa amathuba wokopha, ngakho-ke ukusetshenziswa kwale nhlanganisela kungenzeka kuphela ngonyaka ongu-1.
Ukufakwa kwe-clopidogrel akuthinteki ngama-antacid.
Ukuhlanganiswa kwe-tolbutamide, i-phenytoin inyusa izinga lokuxineka kwabo ku-plasma yegazi.
Izifaniso zikaZilt yilezi: iLopirel, Clopidogrel, Clopidogrel-SZ, Plavix, Aggregal, Detromb, Cardutol, Clopidex, Clopilet, Listab 75, Deplatt-75, Cardogrel, Clopigrant, Lirta, Targetek, Plagril, Egithrombrel, Trivia.
Ukubuyekezwa mayelana neZilt
Iziguli zisabela kahle kulo muthi, zingagcini nje ngokusebenza kwazo, kepha futhi nentengo eyamukelekayo (ngokuqhathaniswa nabalingani abathile ababizayo). Ngokusho kokubuyekezwa, iZilt iyasebenza ngemuva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo nezinqubo zokuqina. Iziguli ziphawule ukuthuthuka enhlalakahleni ephelele, ukunqanyulwa kokuhlaselwa yi-angina, kanye nokungabikho kwe-arterial and vein thrombosis.
Kwesinye isikhathi iziguli zikhononda ngokwenzeka kwemiphumela emibi (i-urticaria, ukuphefumula kanzima), kepha uma uqhubeka nokwelashwa, khona-ke imiphumela emibi engathandeki inyamalala ngokwayo ngemuva kwesikhashana.
Inani le-Zilt emakhemisi
Kuze kube manje, izintengo ezilinganiswayo zeZeke kumakhemisi zimi ngalendlela elandelayo:
amaphilisi aphekwe ngefilimu, ama-75 mg (ama-14 ama-pcs. ngephakethe ngalinye) - ama-ruble angama-470-530,
amaphilisi aphekwe ngefilimu, ama-75 mg (ama-28 ama-pcs. ngephakethe ngalinye) - ama-ruble ayi-830-1200,
amaphilisi aphekwe ngefilimu, ama-75 mg (izingcezu ezingama-84 ngephakethe ngalinye) - ama-ruble angu-1875 - 2030.
Ngemuva kokuphathwa komlomo okukodwa okuphindaphindwe kabili ngomthamo we-75 mg ngosuku, i-clopidogrel idonswa ngokushesha. Amanani aphakathi kwenani eliphakeme kakhulu (i-Cmax) le-clopidogrel engashintshiwe ku-plasma yegazi (2.2-2.5 ng / ml ngemuva kokufakwa kokutholwa komthamo owodwa ka-75 mg) kufinyelelwa ngemuva kwemizuzu engaba ngu-45. Ngokusho kocwaningo lokufakwa kwezinso kwe-clopidogrel metabolites, izinga lokufakwa cishe ku-50%.
I-Clopidogrel isetshenziswe kahle kusibindi. I-in vitro naku-vivo, i-clopidogrel isetshenziswa ngezindlela ezimbili: eyokuqala ixazululwa ngama-esterases futhi iholela ku-hydrolysis ngokwakhiwa kwe-metabolite engasebenzi - okutholwe ku-carboxylic acid (85% yama-metabolites ajikelezayo), kanti okunye kukhathazwa yi-isoenzymes ehlukahlukene ye-cytochrome P450. Ekuqaleni, i-clopidogrel iguqulwa ibe yi-metabolite ephakathi - 2-oxo-clopidogrel. I-metabolism eyalandela ye-2-oxo-Clopidogrel iholela ekwakhekeni kwe-metabolite esebenzayo ye-clopidogrel - i-thiol esuselwa ku-clopidogrel. E-vitro, le ndlela ihlanganiswa yi-isoenzymes CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2 ne-CYP2B6. I-thiol metabolite esebenzayo ye-clopidogrel, ehlukaniswe nge-vitro, ngokushesha futhi ngokungenakuphikiswa isebenzisana nama-platelet receptors, ivimba ukuhlangana kwawo.
I-Cmax ye-metabolite esebenzayo ku-plasma yegazi ngemuva kokuthatha umthamo wokulayisha (i-300 mg) ye-clopidogrel iphakeme kabili kune-Cmax ngemuva kwezinsuku ezi-4 zokusebenzisa i-clopidogrel kudosi yesondlo (75 mg / ngosuku). I-Cmax ku-plasma yegazi ifinyelelwa cishe imizuzu engama-30-60 ngemuva kokuthatha umuthi.
Ngemuva kokufakwa kwe-clopidogrel ebhalwe i-14C, cishe ama-50% omsakazo ophelele akhishwa yizinso futhi acishe abe ngama-46% amathumbu ngaphakathi kwamahora ayi-120 ngemuva kokudonswa. Ngemuva kokulawulwa okukodwa komlomo kwe-clopidogrel ku-75 mg, i-half-life (T1 / 2) icishe ibe ngamahora ayi-6. I-T1 / 2 ye-metabolite esemqoka engasebenzi ejikeleza kwi-plasma yegazi ngemuva kokusetshenziswa okuphindaphindwe kabili ngamahora ayi-8.
Ukuvimbela izinkinga ze-atherothrombotic:
ezigulini zabantu abadala abane-myocardial infarction (kusuka ezinsukwini ezimbalwa kuya ezinsukwini ezingama-35 ubudala), unhlangothi lwe-ischemic (kusuka ezinsukwini eziyi-7 kuye kwezinyanga ezi-6), noma ngokuxilongwa kwesifo se-peripheral arterial occlusion.
ezigulini zabantu abadala abane-acute coronary syndrome: ngaphandle kokuphakama kwengxenye ye-ST (i-angina engagxiliwe noma ukufakwa kwe-myocardial ngaphandle kwe-Q wave), kufaka phakathi iziguli ezazikhipha ngokungenelela kwe-percutaneous coronary, kuhlangene ne-acetylsalicylic acid, nge-ST segment Election (acute myocardial infarction) nge ukwelashwa kwezidakamizwa kanye nethuba le-thrombolytic therapy, kuhlangene ne-acetylsalicylic acid.
Ukuvimbela izinkinga ze-atherothrombotic ne-thromboembolic, kufaka phakathi i-stroke, nge-atrape fibrillation (i-atr fibrillation)
Iziguli zabantu abadala ezine-atrial fibrillation (i-atrial fibrillation), ezinesici esisodwa sengozi sokukhula kwezinkinga zamathambo, azikwazi ukuthatha i-anticoagulants engaqondile futhi zibe nengozi ephansi yokuphuma kwegazi (kuhlangene ne-acetylsalicylic acid).
I-acute coronary syndrome ngaphandle kokuphakama kwengxenye ye-ST
I-acute coronary syndrome enokuphakama kwe-ST ingxenye
Uma sekudlule amahora angaphansi kwayi-12 ngemuva ukweqa umthamo olandelayo, kufanele uthathe ngokushesha umthamo ophuthelwe we-Zilt®, bese uthatha umthamo olandelayo ngesikhathi esijwayelekile,
uma sekudlule amahora angaphezu kwayi-12 ngemuva ukweqa umthamo olandelayo, khona-ke kufanele kuthathwe umthamo olandelayo ngesikhathi esijwayelekile, kuyilapho umthamo ungafanele ukuphindwa kabili.
Ngemuva kokusebenzisa okuphindaphindiwe kwe-clopidogrel ngethamo lika-75 mg ngosuku ezigulini ezinenkinga yokulimazeka kwe-renal (CC 5-15 ml / min), izinga lokuvinjwa kokuhlanganiswa kwe-ADP-indeled plateletation lingama-25% eliphansi kunasemisebenzini enempilo. Kodwa-ke, isilinganiso sokwandisa isikhathi sokuphuma kwegazi sasifana nesamavolontiya anempilo athola i-clopidogrel ku-75 mg ngosuku. Ukubekezelelwa kwezidakamizwa kwakulungile kuzo zonke iziguli.
Izifundo zezilwane zikhombisile ukuthi i-clopidogrel kanye / noma ama-metabolites ayo ayabekwa ebisini lobisi. Ngakho-ke, uma ukwelashwa nge-clopidogrel kudingekile, kunconywa ukuthi uyeke ukuncelisa ibele.
Ama-anticoagulants wokuphathwa ngomlomo
Ukusetshenziswa kanyekanye kwe-clopidogrel kanye nama-anticoagulants ekuphathweni komlomo kungakhuphula ukuqina kokuphuma kwegazi, futhi ngenxa yalokho, ukusetshenziswa kwale nhlanganisela akunconywa.
Ukusetshenziswa kwe-clopidogrel ngomthamo we-75 mg ngosuku ayiguquki i-pharmacokinetics ye-warfarin (isakhi esingaphansi kweCYP2C9 isoenzyme) noma isilinganiso esijwayelekile samazwe omhlaba (INR) kwiziguli ezithola ukwelashwa kwesikhathi eside nge-warfarin. Kodwa-ke, ukusetshenziswa kanye kanye kwe-warfarin kwandisa ingozi yokopha ngenxa yomthelela wayo ozimele owengeziwe ekuqineni kwegazi. Ngakho-ke, kufanele kuqashelwe ngenkathi kusetshenziswa i-warfarin ne-clopidogrel.
I-Acetylsalicylic acid ayithinti ukuvimbela kokuhlanganiswa kweplatelet okubangelwa i-clopidogrel elenziwa ngu-ADP, kepha i-clopidogrel inika amandla umthelela we-acetylsalicylic acid ku-collagen-indeled platelet aggregation. Kodwa-ke, ukuphathwa kanyekanye kwe-500 mg kwe-acetylsalicylic acid kabili ngosuku ngosuku olulodwa akusandisi kakhulu isikhathi sokuphuma kwegazi okubangelwa i-clopidogrel. Ukuhlangana kwe-chemacodynamic phakathi kwe-clopidogrel ne-acetylsalicylic acid kungenzeka kwandise ingozi yokopha. Ngokunikezwe lokhu, kufanele kuqashelwe ngenkathi kuthathwa le mishanguzo, yize ezifundweni zomtholampilo, iziguli zathatha ukwelashwa okuhlanganisa ne-clopidogrel kanye ne-acetylsalicylic acid unyaka owodwa.
Ngokuya ocwaningweni lwezokwelapha kubantu abanempilo, lapho bethatha i-clopidogrel, sasingekho isidingo sokushintsha isilinganiso se-heparin, futhi umphumela we-anticoagulant we-heparin awuzange ushintshe. Ukusetshenziswa kwe-heparin ngesikhathi esisodwa akuzange kuthinte ukucindezelwa kokuhlanganiswa kweplatelet yi-clopidogrel. Mhlawumbe ukusebenzisana kwe-chemacodynamic phakathi kwe-clopidogrel ne-heparin, okuholela engcupheni eyengeziwe yokopha. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kanyekanye kwalezi zidakamizwa kudinga ukuqaphela.
Ukuphepha kokusetshenziswa kanyekanye kwe-clopidogrel, i-fibrin-ezithile noma i-thrombolytics ye-fibrin-ezithile noma i-heparin ihlolwe ezigulini ezine-infute myocardial infarction. Isigameko sokulimala okukhulu emtholampilo sasiqhathaniswa nalokho kanye nokusebenzisa kanyekanye i-thrombolytics, heparin nge-acetylsalicylic acid.
Izidakamizwa ezingezona ezokwehlisa ukuvuvukala (NSAIDs)
Ngokusho kocwaningo lomtholampilo olubandakanya amavolontiya anempilo, ukusetshenziswa kanyekanye kwe-clopidogrel ne-naproxen kwandise ukopha kwe-latent gastrointestinal. Kodwa-ke, ngenxa yokushoda kwezifundo ngokusebenzisana namanye ama-NSAIDs okwamanje, akwaziwa ukuthi ngabe ingozi yokuthola ukopha emathunjini uma isetshenziswa kanye namanye ama-NSAIDs. Ngakho-ke, ukwelashwa kanyekanye kwama-NSAIDs, kufaka phakathi ama-COX-2 inhibitors, kanye ne-clopidogrel kufanele kwenziwe ngokuqapha (bona isigaba "Imiyalo Ekhethekile").
I-CYP2C19 Isoenzyme Inhibitors
IClopidogrel isetshenziswa ekwakhiweni kwe-metabolite yayo esebenzayo, ingxenye ngaphansi kwethonya le-CYP2C19 isoenzyme. Ngakho-ke, izidakamizwa ezivimbela le isoenzyme zingadala ukuncipha kokuhlushwa kwe-metabolite esebenzayo ye-clopidogrel. Ukubaluleka komtholampilo kwalokhu kuxhumana akwaziwa. Ukusetshenziswa okufanayo kanye nama-inhibitors anethonya noma alinganayo we-CYP2C19 isoenzyme kufanele kugwenywe. Ama-inhibitors e-CYP2C19 isoenzyme afaka i-omeprazole ne-esomeprazole, i-fluvoxamine, i-fluoxetine, i-moclobemide, i-voriconazole, i-fluconazole, i-ticlopidine, i-ciprofloxacin, i-cimetidine, i-carbamazepine, i-oxcarbazepine ne-chloramphenicol.
I-Proton pump inhibitors
Ukusetshenziswa kwe-omeprazole kumthamo we-80 mg kanye ngosuku kanyekanye nge-clopidogrel noma ngokuphumula okungamahora ayi-12 phakathi kokuthatha izidakamizwa ezimbili kwehlise inani lokuvezwa kwe-systemic (AUC) ye-metabolite esebenzayo ye-clopidogrel ngo-45% (ngemuva kokuthatha umthamo wokulayisha we-clopidogrel) no-40% (ngemuva kokuthatha umthamo wokulungisa imithamo ye-clopidogrel). Ukwehla kwe-AUC ye-metabolite esebenzayo ye-clopidogrel kuhlotshaniswa nokwehla kwezinga lokuvinjwa kokuhlanganiswa kweplatelet (39% ngemuva kokuthatha umthamo wokulayisha we-clopidogrel no-21% ngemuva kokuthatha umthamo wesondlo we-clopidogrel). Ukuxhumana okufanayo kwe-clopidogrel nge-esomeprazole kuyaphakanyiswa. Ezifundweni zokubheka nezomtholampilo, idatha engqubuzanayo ekubonakalisweni kwemitholampilo kohlelo lwezinhliziyo eziphathelene nalokhu kusebenzisana kwe-pharmacokinetic / pharmacodynamic kuqoshwe. Ukusetshenziswa okuhambisana ne-omeprazole noma i-esomeprazole kufanele kugwenywe.